कमोडिटी मार्केट : धितोपत्र बोर्डको मातहतमा, आकर्षित होलान् त सेयर लगानीकर्ता ? — Arthatantra.com
Arthatantra.com > विशेष > कमोडिटी मार्केट : धितोपत्र बोर्डको मातहतमा, आकर्षित होलान् त सेयर लगानीकर्ता ?
कमोडिटी मार्केट : धितोपत्र बोर्डको मातहतमा, आकर्षित होलान् त सेयर लगानीकर्ता ?
काठमाण्डौं । सरकारले कमोडिटी र फ्युचर मार्केटलाई व्यवस्थित र नियमनका लागि तयार भएको ऐनको मस्यौंदालाई अन्तिम रुप दिएको छ । अर्थमन्त्रालयले केही दिनभित्रै मस्यौैंदालाई अन्तिम रुप दिएर मन्त्रीपरिषद्मा पठाउन लागेको हो ।
अहिले कमोडिटी र फ्युचर मार्केटको कारोबार भएपनि नियमन नहुँदा लगानीकर्ता ठगिरहेका छन् । ऐनको मस्यौंदाभित्र बस्तु विनिमय बजार, बस्तुको कारोबार व्यवसाय,राफसाफ र फर्छयौट व्यवसाय र वेयरहाउस व्यवसाय गरेर चारवटा विषयलाई संबोधन भएको आचार्यले जानकारी दिए ।
यो बजारको नियमनको काम तत्काल धितोपत्र बोर्डले गर्नेछ भने दीर्घकालिन रुपमा छुट्टै संयन्त्रनै गठन गर्नुपर्ने ऐनको मस्यौंदामा उल्लेख छ । धितोपत्र बोर्डले झन्डै चार वर्षअघि कमोडिटी बजारको अवस्था अध्ययन गर्न गठन गरेको कार्यदलले नियमनको अभावमा कमोडिटीको कारोबार जोखिमपूर्ण रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो ।
यही प्रतिवेदनका आधारमा लामो समयदेखि नियमन हुन सकेको छैन । सन् २००६ देखि कमोडिटी बजार खुलेर कारोबार सुरु भएको थियो । कारोबार सुरु भएपछि कमोडिटी एक्सचेन्ज खुल्ने क्रम तीब्र भएको थियो ।
सरकारले नियमनको अभाव भएको भन्दै तीन वर्षअघि नयाँ कमोडिटी एक्सचेन्ज खोल्न प्रतिवन्ध लगाएको थियो । कमोडिटीको कारोबारका लागि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पचास भन्दा बढी एक्सचेन्ज दर्ता भएका छन् । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएकै आधारमा संचालन भइरहेका छन् । सुरुवातमा कमोडिटी एक्सचेन्जमा कारोबार गर्नेको संख्या उल्लेख्य थिए ।
शेयर बजार ओरालो लाग्दा लगानीकर्ता बस्तु खरीदबिक्रीका लागि कमोडिटी एक्सचेन्जमा आउने गरेका थिए । तर नियमनको अभावमा केही लगानीकर्ता समस्यामा पर्न थालेपछि यो कारोबार घटेको हो । कमोडिटी बजारमा कुनैपनि बस्तुको स्वामित्व एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्छ । अहिले कमोडिटी एक्सचेन्जमा सुनचाँदीको कारोबार हुन्छ ।
१० जेठ २०७३, ९.००
२०७३ जेष्ठ १० गते १२:०१ मा प्रकाशित
ग्रीन डेभलपमेण्ट बैंकले ल्यायो ४ लाख ५० हजार कित्ता साधारण शेयर
एक अर्ब लगानीमा दाना उद्योग खुल्यो
घर बनाउने उपयुक्त मौका : सस्तियो निर्माण सामग्रीको मूल्य, कति घट्यो ?
एक अर्ब पुँजी पुर्याउन इन्स्योरेन्सको २९ % बोनस शेयर
उपनिर्वाचनमा ४० करोड खर्च गर्ने, निकासाका लागि अर्थमन्त्रालयमा पत्रचार
प्रभु बैंकको ३ लाख कित्ता सेयर लिलाममा, किन्नु फाइदाजनक !